Barnaamijka Caawinta Kireynta Guryaha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Barnaamijka Caawinta Kirada Guryaha
Barnaamijka kaalmada kirada ee ganacsiga, oo lagu maalgeliyo doolarka gobolka iyo federaalka, ayaa laga yaabaa inay ka hortagto ka saarista iyadoo la bixinayo lacag bixinteedii hore, midda hadda iyo mustaqbalka ee loogu talagalay dadka uu saameeyay cudurka. La xiriir adeeg bixiyaha aaggaaga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad u codsan karto kaalmada.
Ku dhawaaqida gudoomiyaha 21-09 waxay ku amraysaa deeq bixiye kastaa inuu u caddeeyo Waaxda Ganacsiga marka barnaamijkooda caawimaadda kirada uu shaqeynayo, una diro degelka degelka caddaynta. Jadwalka hoose waxaa ku jira iskuxirayaasha caddeynta maxaliga ah ee la soo dhejiyay
Haddii aad raadineyso gargaar kireysi, bixiyeyaasha guryaha ee soo socda ayaa kaa caawin kara. Haddii dhibaato kaa haysato daawashada miiska waad awoodi kartaa Halkan guji si aad uga daawato daaqad cusub.